ရခိုင်စာပီ သင်ကတ်လီ လွတ်လပ်ရီးလိုချင် ရခိုင်စာကိုသင်: May 2009
ခိုင်မာရေ လက်ချောင်းအစုံနန့် ဆွဲမ
ခွဲရဖို့ အသိချေက မြှားတစင်းပိုင်
ငါ့ရင်စိုင်ကို ဖြတ်ဝင်လားစွာ နင့်ခနန့် --။
လွမ်းရစ်လွမ်းဖြေ လွမ်းမပြေနိုင်စရာမလား --။
အံကြိတ်ပျာယ် ထွက်လာမိပါရေ --။
နှုတ်မဆက်ချင်ပါ ပြန်လတ်ဖို့ --။
(အဖရခိုင်ပြည်နန့်ဝီးကွာနီရရေ သူငယ်ချင်းရဲဘော်အပေါင်းအား ဦးထိပ်ထားလျှက်)
Posted by thahlaoo at 6:00 PM No comments: Links to this post
ဗြုန်းစားကြီး ဆိုက်လာရေ အလင်းအောက်
နမော်နမဲ့ ဖြတ်ပျာယ်လျှောက်ခြင်းမဟုတ် --။
ငါ့ကိုယ်မှာ ပျောက်ဆုံးနီရေ အိမ်မက်တခုကို
ပရောမီးသယပ်စ် (Prometheus) လက်ဆောင်ပီးခရေ
“နီထွက်ဘုရင် ကျွန်တော်မျိုး” လို့
ငါ… ကျွန်ဖြစ်နီခရေ --။
အခုတိုင် ရင်ကွဲပက်လက်နန့် --။
မိုင်တိုင် (၂၂၅) အထိ
ငါ့ကိုယ်ငါ သတ်သီဖို့ကောင်းယင့် --။
ဒုတိယ ပရောမီးသယပ်စ် (Prometheus) ဖြစ်ချင်ရေ --။
Posted by thahlaoo at 5:51 PM No comments: Links to this post
ငါ့စိတ်ငါ လိမ်မရစွာက ဒုက္ခ
ဟုတ်သမျှ အားလုံးကို အစုလိုက်
အသက်လည်း ဆက်မရှင်လိုပါ --။
ငါကား သတ္တိမဟိကာ --။
(ရခိုင်ပြည် xxx ငါရို့ပြည် xxx ငါရို့ပြည်ကို ငါရို့အုပ်ချုပ်မည် xxxx)
Posted by thahlaoo at 5:46 PM No comments: Links to this post
ရက်ပြတ်.. ငိုက်နီကတ်ဖို့လား --။
မဖွင့်ဝံ့ ဖွင့်ဝံ့နန့်ရာ တွန့်ဆုတ်
ငါရို့ကို ရယ်ချင်ရယ်နီမည် ..ထော --။
တစစနန့် လွဲလွဲပါလတ်တေ မိုင်တိုင်အောက်
အပူဆိုးနန့် ခြောက်ခြောက်လာလတ်ပျာယ် --။
ဇာကိုအမှန် ရွီးဖို့လဲ --။
တနိ... လွတ်ကိုလွတ်မြောက်ဖို့လိုရေ --။
Posted by thahlaoo at 5:40 PM No comments: Links to this post
အနင်းခံသမျှ လှလှပါလတ်ဖို့ …။
အလင်းတစမျှင် မ၀င်နိုင်ရေ အိပ်ခန်းထဲ
ခြီလေးချောင်း ရုန်းရွိမရရေ စားပွဲခုံတလုံးပိုင်
ဂုဏ်ယူဖို့အင်အား ထွက်လာကတ်စွာအမှား --။
ညချေ… အိပ်အိပ်လားစွာမနည်းပျာယ် --။
ကျောက်ခဲရော မီးသွီးရော ဒြပ်အရောအနှောထဲ
သိဖို့တော့ ကောင်းယင့်ထင်ပါရေ --။
Posted by thahlaoo at 5:35 PM No comments: Links to this post
ရီကိုရာ ခဲအောင်လုပ်မိကတ်တေ ဘ၀မှာ
အိမ်မက်ဆိုးရာ ထူထူလာလတ်တေ --။
သိသိနန့် ရောင့်ရဲမိသူ နှလုံးသားထဲ
ပြက္ခဒိန်လည်း ရက်ရှည်လားခပျာယ် --။
ပြာပုံဘေးမှာ ပိတုံးချေကုတ်လို့ --။
Posted by thahlaoo at 5:30 PM No comments: Links to this post
နှုတ်မရရေ ခြီနှစ်ချောင်းကို ဆွဲမယင်း
ခါးစီးခံရကတ်စွာက မဆန်းပျာယ် --။
စည်းဝါးကျခြီသံချေကို မက်မောတတ်လာရေ --။
ပြန်ပျာယ် မာမာလာကတ်ရရေမလား --။
Posted by thahlaoo at 5:24 PM No comments: Links to this post
အကျွန့်ကို လာနှုတ်ဆက်ပါ --။
“ယခိုင်” “ယခိ” ဆို
“ယခိုင်” “ယခိ” ယာဆို
အကျွန်ရို့အိမ်မှာ လာတည်းပါ --။
“ယခိုင်” နန့် “ယခိ” ကို
Posted by thahlaoo at 11:06 AM No comments: Links to this post
ခံနီရစွာက ပြည်သူ --။
(ကြောင်ချီး) တိ မပါ --။
သူငယ်နာ နှပ်စားတိရာဖြစ်တေ --။
၀မ်းတွင်းပါ ”မာဒြာ” ကို ချွတ်မရ
Posted by thahlaoo at 5:26 AM No comments: Links to this post
“လက်နက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့“ ဆို --။
မနာလိုလို့ ပြောစွာရာဖြစ်ဖို့ --။
မျိုးခြစ်စွာကို သိပါရေ --။
ပန်းကွင်းစွပ်လို့ င်္သဂြိုဟ်ပါဖို့ --။
Posted by thahlaoo at 5:08 AM No comments: Links to this post
တတ်မြောက်ပါသည်၊ အာဂမျိုးချစ် ဆရာတော် --။
ရခိုင်မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၂၅)
Posted by thahlaoo at 4:24 AM No comments: Links to this post
အကြောင်းမဲ့ ကြမ်းပြင်ကို ထုလိုက်မိရေ --။
မိတ်ရိုးများ ကားထွက်လာ၏ --။
ဂေါင်းထဲမှာ ထိုအတွေး ဒေအတွေး
ကြောင်းလို့ ခံစားလိုက်ရရေ --။
ငါးသလောက်ပြုံး ပြုံးလိုက်မိသည် --။
ကကောင်း အရုပ်ဆိုး၏ --။
သက်ပြင်းချရ အခါခါ --။
၀င်းကြွားမင်းမူ အောင်လံထူလျှက် --။
မျက်တွင်းဟောက်ပက် လူမမာ --။
နီလုံးညိုညို ညရိပ်ခို --။
အတ္တ အမှောက်ထု တွင်းနက်အောက်
အသက်ရှင်ရာလား လွတ်မြောက်ရာလား --။
ဒုက္ခအတိမွှမ်း ဆိုးသွမ်းလှပါဘိတကား --။.
အီးချမ်းသော အနာဂါတ် မိုးထက်ကောင်းခင်
ထိန့်ကြိုးရွာသွန်း လောင်းဖြန်းပီးပါဖိလော့ --။
Posted by thahlaoo at 9:39 PM No comments: Links to this post
မြလွှာတမူ၊ ပန်းမိဉ္စူတည်း ---။
ထည်ဝါရပ်တည် ဟိလတ်၏ ---။
ပြိုင်တူရှိသို့ လှမ်းချီတက် ---။
အို -- ရက္ခတိုင်းသား၊ မျိုးချစ်များရို့
ရွှီရောင်ဝင်းပ အနာဂါတ် ---။
Posted by thahlaoo at 8:44 PM No comments: Links to this post
ရိုးမမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၃)
Posted by thahlaoo at 5:45 PM No comments: Links to this post
Posted by thahlaoo at 9:38 AM No comments: Links to this post
Posted by thahlaoo at 7:36 AM No comments: Links to this post
Posted by thahlaoo at 11:17 PM No comments: Links to this post
မေလ (၂၅) ရက်၊ ၂၀၀၂ - ခုနှစ်။
Posted by thahlaoo at 9:47 PM No comments: Links to this post
အဘာလေး အဘာ ... !
အဘာ ... !
“မ,မ” နန့် “ဗျ” ရာကျန်ပျာယ်လတ်
အဘာလေးးး .... !
အဘာတချက်လာကြည့်ဖိ ... !
(ကိုမင်း) (Ko Mum)
Posted by thahlaoo at 7:49 AM No comments: Links to this post
တခါတရံ အဘိုးတန်၏ ---။
အသက်ထိုခါ ဆုံးတတ်ရာ၏ ---။
အမှန်မုက္ချ သက်စွန့်ကြလော့ ---။
နောင်သားတဖန် သည်းမခံနှင့် ---။
Posted by thahlaoo at 8:55 PM No comments: Links to this post
Posted by thahlaoo at 6:11 PM No comments: Links to this post
Posted by thahlaoo at 6:01 PM No comments: Links to this post
စစ်တွေမြို့ အိုးတန်ရပ်ကွက်က ကားသမားရွှေစိန်အောင်သည် မောလိပ်ကသူငယ်ချင်း သာကျော်အောင်ဘားသို့ လည်ဇောင်ရောက်လာလတ်တေ။
သာကျော်အောင် “ဝေး..သူဌီးကြီးလာလာ၊ ဇာကမျက်စိလည်လမ်းမှား ရောက်လာစွာလဲ?”
ရွှေစိန်အောင် “ထားလိုက်ဝေ… ဇာသူဌီးကြီးလဲ”
သာကျော်အောင် “အခု ကားထောင်ထားရေဆို?”
ရွှေစိန်အောင် “သူဌီးမဟုတ်ဝေး သူငယ်ချင်း၊ ဒေဂု ခွက်ကိုင်တောင်းစားရကိန်းဆိုက်နီပျာယ်။
သာကျော်အောင် “ယင်းလောက်တောင်လားဝေ” (မယုံချင်ယုံချင် ပြောလိုက်၏။)
ရွှေစိန်အောင် “ကိုယ်တွိဖြစ်လို့ ပြောစွာဝေး… အခု ကားစက်နှိုးလိုက်ကေ ချူးချူးချဲချဲ မမြည်ပျာယ်”
သာကျော်အောင် “ယေကေ ဇာပိုင်မြည်ရေလဲ”
ရွှေစိန်အောင် “ချီးခီ ငှားခီ၊ ချီးခီ ငှားခီ” လို့ရာမြည်ပျာယ်။
သာကျော်အောင် “ဟား ဟား ဟား”
ရွှေစိန်အောင် “ကားထွက်ဖို့ ဟွန်းတီးကေ ပီပီ လို့မကြားပျာယ်”
သာကျော်အောင် “ယေကေ ဇာပိုင်ကြားရေလဲ”
ရွှေစိန်အောင် “ပေါင် ပေါင်” လို့ရာမြည်ပျာယ်ဝေး။
Posted by thahlaoo at 7:52 AM No comments: Links to this post
Posted by thahlaoo at 10:32 AM No comments: Links to this post
တခါက လင်သယ် ကုန်းထက်ကို တနားတပိုအိပ်ဖို့ တက်လားရေခါ၊ မယားသယ်က ငါးဖမ်းဘုတ်ကို ရီထဲချပနာ ကမ်းနန့် အင်တန်ချေလောက်အ၀ီးမှာ ကျောက်ချပနာ စာဖတ်နီပါရေ။
ရီကန်စောင့် လုံခြုံရေးက ဘုတ်နန့် ရောက်လာပနာ
"ဇာလုပ် နိန်စွာပါရေလဲ" လို့ မီးလိုက်တေ။
"အေချင့် တားမြစ်နယ်မြီဆိုစွာကို သိပါရေလား။"
"အကျွန် ငါးမျှားနီစွာမဟုတ်ပါ။ စာဖတ်နီစွာပါ။"
"ယေကေလည်း ဘုတ်ထဲမှာ ငါးဖမ်းကရိယာ အစုံအလင် ပါနီရေအတွက်နန့် အချိန်မရွီး ငါးဖမ်းနိုင်ပါရေ။ တာဝန်အရ ဒဏ်ရိုက်ရပါဖို့"
"အေချင့် တားမြစ်နယ်မြီ ဖြစ်နီလို့ပါ"
"အကျွန် ငါးမျှားနီစွာ မဟုတ်ပါ။ စာဖတ်နီစွာပါ"
"ယေကေလည်း ဘုတ်ထဲမှာ ငါးဖမ်းကရိယာ အစုံအလင် ပါနီရေအတွက်နန့် အချိန်မရွီး ငါးဖမ်းနိုင်ပါရေ။ တာဝန်အရ ဒဏ်ရိုက်ကို ရိုက်ရပါဖို့"
"ယင်းပိုင်ဆိုကေ အကျွန်လည်း အခင့်ကို ကာမစော်ကားမှုနန့် တိုင်ရပါဖို့"
"ယာ မချေ။ နင့်ကိုငါ တိုက်တောင် မတိုက်သိမ့်ကာ"
"ဟုတ်ပါရေ။ ယေကေလည်း အခင့်မှာ ကရိယာ အစုံအလင် ပါနီပါရေ။ အခင် အချိန်မရွီး စနိုင်ရေဆိုစွာကို အကျွန်သိနီပါရေ"
"ကောင်းယင့် မချေ။ အားလုံးကို ဂရုစိုက်ပါ" ဆိုပနာ ရီကန်စောင့်လုံခြုံရေးစွာ အနားက ချက်ချင်းထွက်ပြီးလားခပါရေ။
Posted by thahlaoo at 8:35 AM No comments: Links to this post
အယင် ကွန်ပျူတာတိပေါ်စက မောင်ကောင်းစံရို့ နယ်တကာလှည့်ပနာ ကွန်ပျူတာရောင်းခပါရေ။ တနှစ်အာမခံနန့် ပျင်လည်း ပျင်ပီးပါရေ။ တရက်နိ နယ်ဖောက်သယ်တယောက်က ဖုန်းဆက်လာပါရေ။
ဖောက်သယ်။ ။ ဟဲလို၊ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာပျင်ချင်လို့ပါ။
ကောင်းစံ။ ။ ရပါရေ။ ဇာပိုင် ပျက်စွာလဲ ပြောပြပါ။
ဖောက်သယ်။ ။ ကကောင်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့ခါ မဟုတ်ပါ။ လဖက်ရည်ခွက်အထိုင် ပျက်လားစွာလောက်ပါရာ။
ကောင်းစံလည်း ခေါင်းနောက်လားပါရေ။ ကွန်ပျူတာမှာ လဖက်ရည်ခွက်အထိုင် ပျက်လားပါရေလတ်။ ဇာခါကများ တပ်ပီးလိုက်ပါရေလဲ။
ကောင်းစံ။ ။ ဇာခါက ၀ယ်စွာပါလဲ။
ဖောက်သယ်။ ။ အယင်နှစ် နတ်တော်လကပါ။
ကောင်းစံ။ ။ ယင်းအချိန်မှာ ကျွန်တော်ရို့ ကွန်ပျူတာမှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတိ မတပ်ပီးပါ။ ဇာနီရာက ၀ယ်စွာလဲမသိပါ။
ဖောက်သယ်။ ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အကိုရို့ဆိုင်က လာဝယ်စွာပါ။
ကောင်းစံ။ ။ ကောင်းပါပျာယ်။ ယင်း လဖက်ရည်ခွက်အထိုင်က ဇာနားမှာ တပ်ထားစွာပါလဲ။ ဇာတစိပ် ကပ်ထားပါရေလဲ။
ဖောက်သယ်။ ။ တနားချေပါနန်း။ ကျွန်တော် တချက် ကြည့်လိုက်ပါမည်။
ရပါပျာယ်။ ယင်း လဖက်ရည်ခွက်အထိုင်က လေးထောင့်ဗုံး ရှိဖက် အထက်နားမှာ ဟိပါရေ။ ခလုတ်ချေကိုနှိပ်လိုက်ကေ လဖက်ရည်ခွက်အထိုင်က ရှိဖက်ကို ထွက်လာပါရေ။ အလယ်မှာ လဖက်ရည်ခွက်နန့်ကွက်တိ အပေါက် ဖောက်ထားပါရေ။ လဖက်ရည်ခွက် မထည့်ချင်ဆိုကေ နောက်တခေါက် ယင်းခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြန်ဝင်လားပါရေ။ တချက်ချေပါ။ တစိပ်ကို ကြည့်လိုက်ပါမေ။ 4X လို့ ရွီးထားပါရေ။
အဘာလေး သီပျာယ် မလားဂု။ CD Drive ကို လဖက်ရည်ခွက် ထည့်စွာဆိုပနာ အေလူသုံးလာစွာ ဇာလောက်ကြာလားပျာယ်လဲ မသိ။
Posted by thahlaoo at 8:17 AM No comments: Links to this post
မြန်မာများက ဘင်္ဂလားတနယ်လုံးကိုသိမ်းပိုက်ရန် တာစူလျှက်ဟိသည်။ သို့ဖြင့် ဗန္ဓုလသည် မြောက်ဦး၌ အင်အားစုဆောင်းလျှက်ဟိသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗြိတိသျှတပ်အင်အားမှာ ဘင်္ဂလားတပ်ဦး၌ (၃၀၀၀) ကျော်ခန့်ဟိသည်။ ရခိုင်တပ်စိတ်တစိပ်လည်း ရာမူး (ပန်းဝါ) တွင် တပ်စွဲချထားသည်။ ထိုအချိန်၌ ဗန္ဓုလမှာ မြောက်ဦးတွင် တပ်စွဲလျှက်ဟိသည်။ သို့သော် ရှိတန်းတွင် သူ၏တပ်များကို အတွင်းဝန်မောင်ဝအားဦးစီးခိုင်းထားသည်။ သူ၏တပ်များမှာ ဘူးသီးတောင် လက်ဝဲဓါတ်အလွန် အလယ်သံကျော်ဆိပ်ထိတပ်ဖြန့်ထားသည်။ ၁၈၂၄ ခုနှစ်မေလတွင် မြန်မာတပ်များ နတ်မြစ်အားဖြတ်ကူးကြောင်း မြစ်ကမ်းနဖူးတွင်တပ်စွဲထားသော ဗြိတိသျှတပ်စုတစုက သတင်းပီးပို့သည်။ အများမကြာ (ပင်းဝါ) တောင်ဖက် ရတ်နာပလောင်အားမြန်မာတပ်များသိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကပ္ပတိန်နိုတင်မှာ ပင်းဝါတွင် တပ်စွဲလျှက်ဟိသည်။ ကပ္ပတိန်နိုတင်က တပ်သားအချို့ကို ရာမူးတွင်ချန်ထားခပြီး ရခိုင်တပ်သား (၁၀၀) ကျော်နှင့် မြန်မာများကိုတိုက်ခိုက်ရန် မေလ (၁၁) ရက်နိညဇာသားတွင် ရတ်နာပလောင်သို့ စတင်ထွက်ခွာသည်။ မြန်မာများက တောင်ကုန်းများထက်တွင် တပ်စွဲထားသည်။ ချီတက်ရာလမ်းကြောင်းကို သေနပ်များပစ်ဖောက်၍ အနှောက်အယှက်ပီးသည်။ ရတ်နာပလောင်အရောက်တွင် ညလုံးပေါက်တိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှဖက်က သယ်ဆောင်လာသော ခဲယမ်းလက်နက်နှင့် သေနပ်ကြီး (၂) လက်ဆုံးယှုံးသည်။ လက်နက်သယ်ဆောင်သော ဆင်မောင်းသမားမကျွမ်းကျင်သောကြောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကပ္ပတိန်နိုတင်က (ရ) ယောက်သီဆုံး၊ (၁၁) ပျောက်ဆုံးဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ရာမူး (ပင်းဝါ) သို့ ဆုတ်ခွာလာရသည်။ တိုအချိန်တွင် ဗြိတိသျှဖက်မှာ တပ်ခွဲသုံးခွဲ ပင်းဝင်တွင်တပ်ဖြည့်လာသည်။
မေလ (၁၃) ရက်နိတွင် မြန်မာများသည် အောင်ပွဲကြောင့်အတင့်ရဲလာပြီး ပင်းဝါတဖက်ကမ်းထိရှိတိုးလာသည်။ ရွာများကိုမီးလျှို့၊ ကျွဲနွားများကိုသတ်ဖြတ်သည်။ မြန်မာအင်အားမှာ လူတသောင်းကျော်ခန့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကပ္ပတိန်နိုင်တင်အောက် အင်အားမှာ ပုံမှန် (၃၅၀)၊ ဆွဲသုံး (၂၅၀) နှင့် ရခိုင်တပ်သား (၄၅၀) ခန့်ရာဟိသည်။ အင်အားမှာအလွန်အမင်းကွာသော်ငြားလည်း စစ်တကောင်းက စစ်ကူရောက်လာမည်ကိုထောက်၍ ကပ္ပတိန်နိုတင်က နောက်မဆုတ်ဘဲ ပင်းဝါအားဆက်လက်ထိမ်းထားရန် ဆုံးဖြတ်သည်။ မေလ (၁၄) ရက်နိတွင် လက်နက်ကြီး (၆) လုံးဖြင့် မြန်မာတပ်များ ချောင်းကိုမကူးနိုင်အောင် ခံပစ်ထားသည်။ သို့သော် မြန်မာများက ချောင်းဖျားပိုင်းမှနီ၍ မြစ်ကိုဖြတ်ကူးလားနိုင်ပြီး ဗြိတိသျှတပ်များ တပ်စွဲထားရာဝန်းကျင်ထိ ရောက်ဟိလာသည်။ မေလ (၁၆) ရက်နိတွင် မြန်မာတပ်များရှိတိုးလာပြီး တရက်လုံးတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ကပ္ပတင်နိုတင်က နောက်ဆုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်သော်လည်း နောက်နိတွင် တပ်ကူရောက်လာမည်ကိုသိ၍ ဆက်လက်တပ်စွဲထားသည်။ တိုက်ပွဲမှာ တရက်နှင့် တမွန်းတည့်ဖြစ်သည်။ မြန်မာတပ်များကလည်း တပ်ကူရောက်လာပြီး ခံကတုတ်နှင့် ကိုက် (၃၀) အကွာထိရောက်လာသည်။ မိုးထက် (၉) ချက်တီးခန့်တွင် ရခိုင်နှင့် ဆွဲသုံးတပ်များက နောက်ဆုတ်လာလတ်သည်။ ဆင်များလည်းကြောက်ပြီးထွက်ပြီးကုန်သည်။ ကပ္ပတိန်နိုတင်က လူအင်အား (၄၀၀) ဖြင့် ဆက်လက်ထိမ်းထားရန် မဟန်မှန်းသိသောအခါ တပ်ဆုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ လက်နက်များစွာ နောက်ချန်ထားခရသည်။ တမိုင်ခန့်လောက်ရာ စနစ်တကျဆုတ်ခွာနိုင်သော်လည်း ချောင်းအကူးတွင် လွယ်ကူအောင် လက်နက်ခဲယမ်းများစွာကို စွန့်ပစ်လိုက်ရသည်။ မြန်မာတပ်များကလည်း နောက်မှာ ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်သည်။ တပ်အားလုံးဖရိုဖရဲဖြစ်ကုန်သည်။ ကျဆုံးအင်အားမှာ (၂၅၀) ခန့်ဖြစ်ပြီး အသားဖြူအရာရှိ (၆) ဦး၊ အန္ဒိယကုလားအရာရှိ (၃) ဦးအနက် (၃) ယောက်ရာအသက်ရှင်သည်။ ထိုသုံးယောက်အသင်ရှင်သည်တွင်လည်း (၂) ယောက်က ဒါဏ်ရာနှင့်ဖြစ်သည်။ မြန်မာများက ပင်းဝါကိုသိမ်းပြီး ရှိသို့မိုင် (၂၀) ခန့်အကွာ စုက္ကရာထိချီတက်လာသည်။ ဒေသခံများက အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပင်လျှက်ဟိသည်။
သို့သော် မြန်မာများ ပင်းဝါကိုသိမ်းပိုက်ချိန်တွင် ဗြိတိသျှတပ်များက ရီကြောင်းအားဖြင့် မာန်အောင်ကို ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်သည်။ မေလ (၁၂) ရက်နိတွင် မာန်အောင်မြို့သို့အ၀င်ချောင်းထိ တပ်ထောက်များရောက်လာသည်။ လောင်းသမ္ပာန်တစီးအား ကုန်သည်ယောင်ဆောင်ပြီး မာန်အောင်မြို့ထဲဖက်သို့ ရန်သူမြန်မာတပ်အနီအထားကိုစုံစမ်းရန်လွှတ်လိုက်သည်။ မေလ (၁၄) ရက်နိတွင် လူအင်အား (၃၀၀) ခန့်ဖြင့် ချောင်းအတိုင်းဝင်၍ မာန်အောင်မြို့ကိုတက်သိမ်းသည်။ ပထမ ရှိတန်းစခန်းထောက်ကိုသိမ်းပြီး ဒုတိယ စခန်းကိုပြန်သိမ်းသည်။ မေလ (၁၉) ရက်နိတွင် ကြောက်ပြီးထွက်ပြီးရန်ကြံသော မြန်မာမြို့ဝန်အား လမ်းတွင် ကင်းထောက်တပ်ခွဲက ဖမ်းမိသည်။ ကျွန်းကိုထိမ်းရန် တပ်ရင်း (၂၀) အားချန်ထားခပြီး ကျန်တပ်အင်အားဖြင့် ရန်ကုန်သိမ်းရန် ဆက်လက်ချီတက်သည်။ ဗြိတိသျှတပ်များက ရန်ကုန်ကိုဝင်သိမ်းသဖြင့် ဗန္ဓုလရခိုင်မှ ဆုတ်ခွာရသည်။ မောင်တော၊ လက်ဝဲဓါတ် ရှိတန်းစစ်မျက်နှာတွင် တပ်အင်အားအနည်းငယ်မျှရာချန်ထားခသည်။ ပင်းဝါစစ်ပွဲတွင် မြန်မာဖက်က (၂၀၀) ခန့်ဒါဏ်ရာရသည်။ သို့သော် ဗြိတိသျှ၏အဖမ်းအဆီးခံရကာ သတင်းပေါက်ကြားမည်စိုးသဖြင့် အားလုံးကို အစတုန်းသတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ ၁၈၂၄ မိုးရာသီတွင် ရာသီဥတုအနီအထား၊ သဘာဝအနီအထားများကြောင့် စစ်တိုက်ရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့် စစ်ဆင်မှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရသည်။ မိုးရာသီကုန်သည်နှင့် ရခိုင်ကိုသိမ်းရန်အမိန့်ရသည်။ အဓိကဦးတည်ချက်မှာ မြောက်ဦးသို့ချီတက်ရန်နှင့် ယင်းတွင်တပ်စွဲထားသော မြန်မာတပ်ကို တိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် စစ်ဆင်မှုအစပြုသည်။ ရခိုင်သိမ်းမည့်တပ်အင်အားမှာ (၉၉၃၂) အင်အားဟိသည်။ ဘင်္ဂလားမြင်းစီးတပ်သား (၆၀၀) ၊ အမြောက်တပ် (၆၅၀) ၊ ရခိုင်တပ် (၅၅၃) နှင့် ရှိတန်းထိုးဖောက် (၆၄၉) ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ တပ်ရင်းစစ်ဆင်မှုကို ဗိုလ်မှုးချုပ် (Brigadier General Morrison) က ဦးစီးသည်။ နိုင်ငံရေးအကြံပီးအဖြစ် စစ်တကောင်းခရိုင်ဝန်တရားသူကြီး (District Magristrate of Chittagong, Robertson) ကလိုက်ပါပြီး ရော်ဘတ်ဆင်နှင့်အတူ ရခိုင်သားအနည်းငယ်လိုက်ပါသည်။ ၁၈၂၅ ခု ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက်နိတွင် စစ်ဆင်မှုစသည်။ ဖေဖ၀ါရီလ (၁) ရက်နိတွင် မောင်တောကိုစသိမ်းသည်။ ရခိုင်သားများက မြန်မာကိုကြောက်၍ ဗြိတိသျှများအားကူညီရန် တွန့်ဆုတ်လျှက်ဟိသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာများအားအကူအညီမပီးရန်သတိပီးရသည်။ ဖေဖ၀ါရီလ (၁၂) ရက်တွက် ဆက်လက်ချီတက်ရန် လုပ်ငန်းစတင်သည်။ ရာသီဥတုဆိုးဝါးသဖြင့် လက်နက်ခဲယမ်းတင်သင်္ဘောတစီး လက်နက်ခဲယမ်းများစွာဆုံးယှုံးရသည်။ လူသီလူပျောက်မဟိ။ (၂၀) ရက်နိတွင် ကုန်းကြောင်းချီလာသောတပ်များ အငူမော်သို့ရောက်သည်။ သို့သော် ဖေဖ၀ါရီ (၂၇) ရက်နိတိုင်အောင် ရီကြောင်းချီမည့်တပ်များကို စုစည်းမရဖြစ်နီသည်။
ချောင်းဖီလာတွင် ဗြိတိသျှတပ်များအနည်းငယ်အထိနာသည်။ စစ်တွေတဖက်ကမ်း ဆင်တော်မော်တွင်တပ်စွဲထားသော မြန်မာများအား မောင်းထုတ်လိုက်နိုင်သည်။ ရီကြောင်းချီသည့်သင်္ဘောများကို ပိန္နချောင်းရွာသူကြီးက လမ်းပြသည်။ ကုလားတန်မြစ်ကြောင်းအတိုင်းချီ၍ ပုဏ္ဏားကျွန်းတဖက် ကြိမ်ချောင်းဝတွင် တပ်ချသည်။ ဖေဖ၀ါရီလ (၂၁) ရက်နိတွင် ကုလားတန်မြစ်တလျှောက် စစ်သင်္ဘော (၁၀၀) ခန့်နှင့် မြန်မာတပ်အင်အား (၂၀၀၀) ခန့်ဟိကြောင်းသတင်းရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်က လူတင်စစ်သင်္ဘော (၈) စီးနှင့် လက်နက်တင် (၅) စီး လူအင်အား (၄၅၀) အား စတင်စေလွှတ်သည်။ စစ်တွေမြောက်ဖက် (၂၈) မိုင်အကွာ ချောင်းဖီလာတွင် မြန်မာများအခိုင်အမာ တပ်စွဲထားကြောင်းသတင်းရဟိသည်။ တပ်အင်အားမှာ (၁၀၀၀) ခန့်မျှဟိမည်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းရသည်။ သို့သော် မြောက်ဦးသို့ချီရာလမ်းကြောင်း နှောင့်အယှက်မဖြစ်စီရန် ချောင်းဖီလာမြန်မာတပ်ကို ဦးစွာပထမခြီမှုန်းပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဖေဖ၀ါရီလ (၂၃) ရက်နိတွင် ချောင်းဖီလာမြန်မာတပ်ကို စမြင်ရသည်။ သို့သော် တပ်အင်အားမှာ ခန့်မှန်းသည်ထက် ပိုများနီသည်။ ဗြိတိသျှတပ်များအား မြန်မာကင်းထောက်စခန်းနှစ်ခုမှ သေနပ်များပစ်ဖောက်သည်။ မြန်မာများက သေနပ်များပစ်ဖောက်နီသဖြင့် ကမ်းတက်မရဖြစ်နီသည်။ နှစ်နာရီခန့် အပြန်အလှန်သေနပ်များပစ်ဖောက်ပြီးနောက် တပ်ရင်းဗိုလ်ချုပ်က ချောင်းအတိုင်းစုန်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သို့သော် ဖြားရီတက်တွင် သင်္ဘောသုံးစီးကမ်းကပ်လိုက်သည်။ အချိန်မှာ ညဇာသား (၅) ချက်တီးခန့်ဖြစ်သည်။ ကမ်းကပ်ချိန်မှာ မိုးထက်သား (၅) ချက်တီးထိဖြစ်သည်။ သို့သော် အစောပိုင်းတိုက်ပွဲတွင် မြန်မာဖက်က အထိနာထားသဖြင့် အနှောင့်အယှက်တစုံတရာမဟိ။ ဗြိတိသျှဖက်မှ (၄) ယောက်ကျ၊ (၃၁) ယောက်ဒါဏ်ရာရသည်။ နောက်ပိုင်း ၄င်းတောင်ဖီလာစခန်းအားတက်သိမ်းရန်အစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ရော်ဘတ်ဆင်က ရီကြောင်းချီလျှင် နှေးသည်ကတကြောင်း၊ ချောင်းဖီလာနှင့် အငူမော်တွင်တပ်စွဲထားသော မြန်မာများကကြားဖြတ်အတိုက်ခံရမည်ကိုသတိထား၍ ကုန်းကြောင်းချီရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး ဟင်းခရွာချောင်းတောင်ဖက်နှင့် အရှိကမ်းမှ ကုန်းကြောင်းစချီသည်။ သို့သော် ချောင်းမြောင်းအလွန်များသဖြင့် မြောက်ဦးတရောက်ချီတက်ရန်မလွယ်။ တချို့နီရာများတွင် တောတောင်များကလည်း ကန့်လန့်ဖြတ်ထားသည်။ သို့သော် ရာသီဥတုမှာ ပူသော်လည်းကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်။ ချောင်းများမှာ အညာရီကြီးခြင်းမဟိ။ ဒေသခံများနှင့်လည်း အဆင်ပြေသည်။ မတ်လ (၂၀) ရက်နိတွင် ဟင်းခရွာချောင်းက စဖြတ်သည်။ (၂၄) ရက်နိ စပါးထားချောင်းကမ်းထောင့်တွင် စခန်းချသည်။ ရန်သူမြန်မာတပ်များက ရှိ (၂) မိုင်အကွာ ပါးတော်တောင်တွင် တပ်စွဲထားသည်။ သို့သော် ကုန်းကြောင်းချီလာသောတပ်များသည် စစ်တကောင်းက စထွက်လာကတည်းက မည်သည့်အခက်အခဲမျှမဟိ။ (၂၅) ရက်နိတွင် ရှိတန်းတပ်ခွဲတခုက စပါးထားချောင်းနှင့် ၀ါးပြိုင်ချောင်းကို စဖြတ်ကူးသည်။ (၂၆) ရက်နိတွင် တပ်ရင်းတခုလုံးကူးဖြတ်သည်။ ချီတက်ရာတွင် လမ်းကြောင်း (၄) ခုခွဲ၍ ချီတက်သည်။ လက်ဝဲဖက်တွင် သင်္ဘောဖြင့်ချီတက်သည်။ အခက်အခဲဟိသည်မှာ ဆင်ဖြူတောင်ချောင်းရီတိမ်သဖြင့် အခက်ကြုံရသည်။ တပ်ရင်းက ချောင်းကမ်းနားယောင် ကုန်းကြောင်းချီသည်။ ပါးတော်တောင်တွင် တနာရီလောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးသည်နှင့် မြန်မာတပ်များထွက်ပြီးလားကတ်သည်။ သို့သော် တောတောင်ထူထပ်သဖြင့် ရှိဆက်ချီတက်ရန် အနည်းငယ်ကြန့်ကြာနီသည်။ ဖြားကျသည်နှင့် ဇီးဇာချောင်းကိုဖြတ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာတပ်များက ချောင်းဖီလာစခန်းကို စွန့်ခွာပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအခါ မြန်မာတပ်များက မြောက်ဦးတောင်ဖက် (၁၀) မိုင်အကွာ မဟာထီးတွင် တပ်စွဲထားသည်။ လောင်းကြက်ချောင်းက ဘက်သုံးတန်ကာဆီးထားသည်။ ကမ်းထောင်းက စောက်သည်။ တောင်ကုန်းက ခံတပ်ဖြစ်နီသည်။ မြန်မာတပ်စိပ်တစိပ်က ဗြိတိသျှတပ်နှင့်ရှိဆိုင် တဖက်ကမ်းတွင် တပ်စွဲထားသည်။ (၂၇) ရက်နိ မိုးထက်စောစောမြုံစဲသည်နှင့် တပ်မဟာ (၄၄) မှ တပ်ခွဲသုံးခွဲက တဖက်ကမ်းမှ ရန်သူအားစတင်တိုက်ခိုက်သည်။ ပြောင်းအမြောက်များစွာပစ်ဖောက်ပြီးနောက် ဖြားရီကျတွင် ချောင်းကိုဖြတ်သည်။ နောက်ထပ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံမှု တစုံတရာမဟိဘဲ မဟာထီးကို သိမ်းပစ်နိုင်သည်။ ယခုအခါ မြောက်ဦးနှင့်ခရီးများစွာ မကွာဝီးတော့ပေ။ မြင်းတပ်ဖွဲ့ကလည်း မြန်မာများ တန်းထားများကိုမဖျက်ဆီးမှီ အချိန်မှီမောင်းနှင်ထုတ်နိုင်လိုက်သည်။ မဟာထီးနှင့် မြောက်ဦး ကျောက်ခင်းလမ်းဟိသည်။ မတ်လ (၂၈) ရက်နိတွင် ပရိန်သို့ရောက်သည်။ ပရိန်မှာ မြောက်ဦးသို့ဝင်ရန် အရှိတန်းခါးပေါက်နှင့် အနီးဖြစ်သည်။ မြန်မာများက ပေ (၃၅၀) (၄၅၀) အမြင့်ဟိသော တောင်တန်းတလျှောက် ကွက်ကြားကွက်ကြား ခံတပ်ချထားသည်။ မြောက်ဖက်တွင်လည်း လူ (၃၀၀၀) ဖြင့် တပ်စွဲထားသည်။ မြန်မာတပ်စုစုပေါင်းအင်အားမှာ (၉၀၀၀) ခန့်ဟိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ မတ်လ (၂၉) ရက်နိတွင် ခြီမြန်တပ်ရင်း (၅၄) မှ တပ်ခွဲတခွဲ မြောက်ဖက်ခံတပ်ကို စတိုက်ခိုက်သည်။ ဒုတိယခြီမြန်တပ်မှ တပ်ခွဲ (၄) ခွဲ၊ (M.N.I) တပ်ရင်း (၁၀) နှင့် (၁၆) မှ တပ်ခွဲ (၆) ခွဲ၊ ရခိုင်တပ်ခွဲတစ်ခွဲ ပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်သည်။ သို့သော် ပထမပိုင်းတွင် အကျအဆုံးများသည်။ အထိအခိုက်များစွာဟိသည်။ အရာဟိများစွာ အထိနာသည်။ သို့ဖြင့် ရော်ဘင်ဆင်နှင့်အတူလိုက်ပါလာသော ရခိုင်လူကြီးများကိုခေါ်ယူ၍ မည်သို့ဆောင်ရွက်မည်နည်း အကြံများရယူသည်။ ဒေသခံများကပြောသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ရော်ဘင်ဆင်သည် လူပျိုလူရွယ်ဖြစ်ပြီး အရုပ်လည်းလှသည်။ ပရိန်သျှင်မ မြသွင်က ဗိုလ်ချုပ်ရော်ဘင်ဆင်အားချစ်ကြိုက်နီသည်။ အထိအခိုက်အကျအဆုံးဖြစ်ရခြင်းမှာ ပရိန်သျှင်မ မြသွင်အား ဂရုမစိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်လူကြီးများအကြံဥာဏ်ရယူပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရော်ဘင်ဆင်မှာ ပရိန်သျှင်မမြသွင်နှင့် လက်ထပ်ပွဲပြုလုပ်ရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရခြင်းမှာ ရခိုင်တပ်သားများအား စိတ်ယုံကြည်မှု ရစီရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းကိုကြားသည်နှင့် မြန်မာများလည်း ကြေက်ရွံ့စီမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် လက်ထပ်ပွဲကို တရားဝင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မတ်လ (၂၆) ရက်မှစ၍ ဒါဏ်ရာအနာတရရသည်မှာ (၂၁၃) ဦးဖြစ်၍ (၃၀) သီဆုံးသည်။ သုံးရက်ခန့်မည်သို့မျှမတားဖြစ်သော်လည်း လေးရက်မြောက်တွင် ပြည်သူများထံမှတစုံတရာ လုယက်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ သားမယားများအား ကျူးလွန်ခြင်းပြုလုပ်ပါက ကြီးစွာအပြစ်ပီးမည်ဖြစ်ကြောင်း အမိန့်ထုတ်ပြန်သည်။ ထိုသို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ကြောက်ရွံ့ပြီးထွက်ပြီးကုန်သောပြည်သူများ ပြန်လာလတ်ကတ်သည်။ မြောက်ဦးကိုသိမ်းပြီးသော် မြန်မာများ အသီးသီးတိမ်းယှောင်ထွက်ပြီးကုန်သည်။ နောက်ကလိုက်တိုက်သော်လည်း လူ (၃၀၀) ခန့်လောက်ရာ သီဆုံးဖမ်းမိရလိုက်သည်။ အမ်း၊ ဒလက်ဖက်သို့တချို့၊ လေးမြို့ချောင်းဖက်မှ မြန်မာပြည်သို့တချို့ အသီးသီးထွက်ပြီးလားကတ်သည်။ မြောက်ဦးကိုသိမ်းပြီးသော် ရမ်းဗြဲကိုဆက်သိမ်းသည်။
တတွတ်ရဲပျာ မျက်ရည်တိ စိုနီတုန်း --။
“အကျွန်မငိုအောင် ကျင့်ထားရေ” လတ် --။
ငါ့အဘာ ငါ့အစ်ကို --။
Posted by thahlaoo at 9:54 PM No comments: Links to this post
ငါ .. ရခိုင်စာကားပြောရေ --။
ကျွန်စာကိုရာ ရွီးတတ်တေ --။
ငါ့လက်ချောင်းတိကို ဖြတ် --။
Posted by thahlaoo at 3:58 PM2comments: Links to this post
ကြာဆိပ်အင်းရွာတရွာလုံး ငြိမ်ဆိတ်လျှက်ဟိသည်။ ပုရစ်ချေ၊ မြွီချေ၊ ဖားချေမြည်သံကလွဲလို့ လူသူတိတ်ဆိတ်နီသည်။ မြောင်ဘက်င်္သချိုင်းတောက ခဲဝါအူသံများ တချက်နှစ်ချက်ကြားနီရသည်။ အဘောင်ကြာဇံသာတယောက် သဘောက်ခင်းအိပ်ဖို့ပျင်နီစဉ်တွင် ခဲဝါအူသံများထွက်ပါလတ်သည်။ ကြားနီကျဖြစ်၍ အဘောင်ကြာဇံသာ ခဲဝါအူသံများကိုဂရုမစိုက်ဘဲ အိပ်ရာတွင် ဂေါင်းချလိုက်သည်။ ကကောင်းမကြာ လူတစု အဘောင်အိမ်ရှိတန်းခါးကို လာခေါက်သည်။ "အသူရို့လဲ ညဉ့်မိုက်သိုင်ခေါင်" ဟု အဘောင်က မီးလိုက်သည်။ “အကျွန်ရို့ ထိုဖက်ရွာကပါ၊ အကျွန့်မယား ကိုယ်ဝန်ကြင်နီလို့။ ကျေးဇူးပြုလို့ ကူညီပါ"
အဘောင်ကြာဇံသာသည် ဗိန္ဓောလက်သည်တယောက်ဖြစ်သည်။ ရွာနီးဝန်းကျင်တွင် သူမ မမွီးပီးခသော လူမဟိ။ အသူပင် ကိုယ်ဝန်ကြင်ကြင် အဘောင်ဘားသို့ အပြီးလာကတ်သည်။ အဘောင်က ဇာချိန်မှာလာခေါ်လာခေါ် ပြီး၍လား၍ ကူညီတတ်သည်။ အခုလည်း အဘောင်တယောက် ပရုန်းနရုန်းထပြီး တန်းခါးလားဖွင့်ပီးလိုက်သည်။ အလွန်လှပခန့်ငြားသော လူလတ်ပိုင်းအရွယ် (၅) ယောက်သည် အဘောင်ကို အပြုံးနှင့်ဆီးကြိူလျှက်ဟိသည်။ "အဘောင် အကျွန်ရို့ အင်္ဂရားချိုင်ရွာကပါ။ အကျွန့်မယား အချေမမွီးနိုင်လို့ အကူအညီလာတောင်းစွာပါ။ အဘောင် လမ်းလျှောက်ကေ ညောင်းဖို့မှန်းသိလို့ အကျွန်ရို့ ထမ်းကုတင်ပါ တခါတည်းယူလာပါရေ" ဟု လူရွယ်တယောက်က ရှိကိုတလှမ်းတိုး၍ပြောသည်။ "အေး ကောင်းယင့်" ဆိုပနာ အဘောင်လည်း ကုတင်ထက် တက်ထိုင်လိုက်သည်။ ထိုရွာသို့ရောက်ဖို့ (၂) ချက်တီးလောက်ကြာသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ ထိုလူရွယ်များသည် တယောက်နှင့်တယောက် စကားလုံးဝမပြော။ အဘောင်စိတ်ထဲတွင် “ကကောင်းစကားနည်းရေ အချေတိရာမလား” ဟု စဉ်းစားနီမိသည်။
(၂) ချက်တီးလောက်အကြာတွင် သူရို့ရွာစကို နင်းမိသည်။ တရွာလုံး တိတ်ဆိတ်နီသည်။ ရွာလယ်ကောင်တည့်တည့် အိမ်တအိမ်မှ မီးရောင်ကိုမြင်ရသည်။ ကျွန်းရွာအတိုင်းအတာအရ ဒေအိမ်သည် လူရတတ်အိမ်ဖြစ်ဖို့များသည်။ လူများသည် အဘောင်ကြာဇံသာအား ထိုအိမ်ထက်သို့ ဆောင်ယူလားကတ်သည်။ အိမ်သည် ပျိုင်စီပျိုင်ထောင် အိမ်ကြီးရခိုင်ဖြစ်သည်။ တန်းပျင်းခန်းကိုဝင်သောအခါ အလွန်တရာမွှီးကြိုင်လန်းဆန်းသော အနံ့တမျိုးကို လျှူလိုက်မိသည်။ အဘောင်ကို အသက် (၅၀) ခန့်အရွယ် အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်က ဘယ်လက်ခေါင်အခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်လားသည်။ လူရွယ်များကမူ တန်းပျင်းခန်းတွင် ထိုင်လျှက်စောင့်ကြည့်နီသည်။ ဘယ်လက်ခေါင်အခန်းတွင် အသက် (၂၅) ခန့်အရွယ် အလွန်တရာချောမောလှပသော အမျိုးသမီးတယောက် အချေမမွီးနိုင်ဘဲ အော်ညီးလျှက်ဟိသည်။ အများမကြာ "အုံးဝန်၊ အုံးဝန်" ဟု အချေငိုသံထွက်လာသည်။ တန်းပျင်းခန်းတွင်ထိုင်စောင့်နီသော အဖသေလည်း ကောင်းကောင်းပျော်လားသည်။ အချေမှာ တုတ်တုတ်၀၀ချစ်ဖို့ ကကောင်းကောင်းသည်။ တအိမ်လုံးသား အဘောင်ကို ကောင်းကောင်းကျေးဇူးတင်သည်။
မွီးဖွားပြီးသောအခါ အဘောင်က အ်ိမ်ပြန်ပို့ရန် လူရွယ်များကိုပြောသည်။ ထိုအခါ လူရွယ်များက "အဘောင် သန်းခေါင်လည်းကျော်လားပါယာ၊ အိမ်ကို မိုးထခါ ပြန်ပါဖိ၊ အကျွန်ရို့ အဘောင်အတွက် အိပ်ရာခင်းထားပြီးပါယာ၊ အေမှာ တညအိပ်လိုက်ပါ" ဟုဆိုသည်။ အဘောင်လည်း ခရီးညောင်းလာသဖြင့် မိုးထမှပြန်ရန် သဘောတူလိုက်သည်။ ထိုအထဲမှ လူရွယ်တဦးသည် အဘောင်အား အိပ်ခန်းထဲသို့ ခေါ်ဆောင်လားသည်။ အိမ်ကလည်းကြီးရေပိုင် အိပ်ခန်းကလည်း ကျယ်သည်။ အခန်း၏နံရံလေးဖက်တွင် မျိုးစိုင်ဘောင်ဆက်ဟုထင်ရသော ဓာတ်ပုံကြီးများ ချိတ်ဆွဲထားသည်။ အိပ်ကုတင်မွိရာကြီးမှာ အလွန်နုညံ့ညက်ညောလှသည်။ အခန်းထဲမှ စံကားနံ့ကဲ့သို့ မဖော်ပြနိုင်သော အနံ့တမျိုးရသည်။ ထိုအနံ့ကြောင့် အဘောင်သည် အိပ်ရာထက်တွင် လှဲလိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်း အိပ်ပျော်လားသည်။
ကြာဆိပ်အင်းရွာမှ အဘိုးသာကျော်ဦးသည် ထုံးစံအတိုင်း မိုးထ (၅) ချက်တီးလောက်တွင် အိပ်ရာမှထလိုက်သည်။ မိုးမလင်းခင် သူများထက် အယင်ထမှ နွားချီးမှိုအများကြီးကောက်လို့ရဖို့။ နွားချီးခြောက်များမှ ဖြူဖြုဆွဆွထွက်နီသောမှိုပွင့်များကို ဆောင်းရာသီတွင် စောစောထ၍ အလုအယက်ကောက်ရသည်။ ယင်းအလုပ်ကို အဘိုးတသက်လုပ်စားပါလတ်စွာ။ ဒေနိလည်း အဘိုးတယောက် ၀မ်းရီးအတွက် ချမ်းချမ်းနှင့် ပုဆိုးကိုခေါင်းကချုံလျှက် မှိုကောက်ထွက်လာသည်။ ရွာတောင်ဖက် နှစ်ခရီးလောက်လျှောက်ပြီးသောအခါ လယ်စွက်အများကြီးဟိသော ချောင်းနားဖက်သို့ရောက်သည်။ အရှိဝါးလေးပြန်လောက်အကွာ လယ်ကန်းသင်းထက်တွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း လူတယောက်လဲနီသည်ကို တွိရသည်။ ထိုလူသည် အသက်အားဖြင့် အဘိုးနှင့် ရွယ်တူဟုထင်ရသည်။ အဘိုးသည် ထိုလူနားသို့လားကြည့်သောအခါ သူရို့ရွာက ၀ါကြီးမ အဘောင်ကြာဇံသာဖြစ်နီသည်။ အဘိုးသည် အဘောင်အား သူမလက်မောင်းကိုကိုင်လျှက် "ယော် ၀ါကြီးမ ကန်းသင်းထက်မှာ အိပ်နီရေကာ။ မိုးလင်းယာ ထဖိ" ဟု နှိုးလိုက်သည်။ အဘောင်သည် ဗြုန်းဆို ငေါက်စောက်ထလိုက်သည်။ ပြီးနောက် အဘိုးကိုကြည့်လျှက် "ယော်.. ငါဇာကိုရောက်နီရေလဲ။ ညက မွိရာထက်မှာအိပ်နီစွာ အခု ကန်းသင်းထက်မှာရာ ရောက်နီရေကား" ဟု ယောင်ယမ်းပြီးပြောသည်။ ထိုအခါ အဘိုးသာကျော်ဦးက "ဘလောက်ရယ်ဖို့ကောင်းရေ ၀ါကြီးမလည်းချင့်။ ကန်းသင်းထက်မှာ တုံးစင်းစင်းလို့။ မိုးလင်းကြောင်တောင်ထိ အိပ်နီပြီးကေ" ဟုပြောလျှက် အူဆို့ပါအောင်ရယ်သည်။ ထိုအခါမှ အဘောင်သည် ညကတွိကြုံခရသော အဖြစ်အပျက်ကို အတွက်ရသည်။ ညက ဂျတ်လူမျိုးများခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသည်ကို အဘောင်ကြာဇံသာကလွဲလို့ တခြားမည်သူတယောက်ကလည်း သိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
Posted by thahlaoo at 12:09 PM No comments: Links to this post
ဘဂ၀ါဇိန ရောက်သောခါ --။
မြတ်စွာဗုဒ္ဓ ပြုံ့တော်မူ --။
နီမောင်းညိုမြ ရောင်ခြောက်သွယ် --။
ထိန်လင်းတောက်ပ ကူးယှက်လာ --။
သဒ္ဓါပြင်းပြ ပီတိဟုန် --။
ရှိခိုးဝန္ဒန လျှောက်လီခါ --။
ဆင်မြန်းစုံမက် ဦးတင်ချီ --။
သမိုင်းနာမ ဗျာဒိတ်ဟာ --။
ကြငှန်းတည်ဆောက် စိုးစံလာ --။
မြောက်ဦးရွှီနန်း ရောက်သောခါ --။
မင်းဘာမင်းမြတ် စိုးတော်မူ --။
ချွန်းနှယ်အုပ်လို့ ကတုတ်ခံ --။
က၀ိနာမ မြတ်ဆရာ --။
ဌာနသီရိ ဘုမ္မိမြီ --။
ကောင်းမှုဒါန ပြုသောခါ --။
ပုထိုးတော်ကြီး မြတ်မွီတော် --။
ဇမ္ဗူသောင်းတွင်း ထွဋ်မဏ္ဍိုင် --။
ဗုဒ္ဓာဓိပတိ ငါရို့ပြည် --။
ထက်အောက်အနန္တ စက္က၀ါ --။
မုနိဗုဒ္ဓ အာရဟံ --။
ပူဇော်ရဟ ထီးတော်လှု --။
သောင်းသောင်းသာဓု ဟစ်အော်ကာ --။
၀န္ဒနာမ ဦးထက်တင် --။
ထီးတော်ကပ်လို့ လွန်သပ္ပါယ် --။
သဂါဝရ ကုသိုလ်ဟုန် --။
အန္တရာယ်ပေါင်း ကင်းဝီးကွာ --။
နတ်ရွာအတိ လွန်စည်ပင် --။
များစွာသတ္တ အီးချမ်းစီ --။
ကျမ်းဟောင်းမော်ကွန်း စာအဆို --။
များလူခပင်း သိလီအောင် --။
စာညွှန်းစီကုံး ပီးလိုက်တေ --။
သာဓုသာဓု ခေါ်ကတ်လီ --။
(၁၉၅၆-၅၇) ခုနှစ် သျှစ်သောင်းဘုရားသံထီးတင်ရာတွင် သံထီးကို သင်္ဘောဆိပ်မှကြိုလာစဉ်ဆိုသော သံကျပ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီးဦးသာထွန်းရွီးစပ်စီကုံးသည်။
Posted by thahlaoo at 12:31 PM No comments: Links to this post